हवाइ इन्धनको मूल्य घटेसँगै आन्तरिकतर्फको भाडादर पनि घट्यो, कँहाको कति भयो ?
काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले बिहीबार रातिदेखि आन्तरिक तर्फको हवाइ इन्धनको मूल्य घटाएसँगै अन्तरिक हवाइ सेवाको पनि भाडा दर घटेको छ ।
वायुसेवा सञ्चालकहरूको छाता संगठन नेपाल वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका प्रवक्ता घनश्याम आचार्यका अनुसार दुरीको हिसाबमा १८५ देखि ३४५ रुपैयाँसम्म भाडा घटेको छ । उनले भने, ' आइतबारदेखि लागू हुनेगरी फ्युल सरचार्ज (इन्धन शुल्क)मा कम्तीमा १ सय ८५ रुपैयाँसम्म घटाएइको छ ।'
नेपाल आयल निगमले बिहीबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी १०४ रुपैयाँ ५० रुपैयाँको आन्तरिक हवाइ इन्धनको मूल्य ९४ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरेको थियो ।
नयाँ हवाई भाडा यस्तो छ :
माउण्टेन फ्लाइट ११,३००/- रुपैयाँ
काठमाण्डौ–पोखरा ५०५०/- रुपैयाँ
काठमाण्डौ–भरतपुर ३६५०/- रुपैयाँ
काठमाण्डौ–विराटनगर ७५५०/- रुपैयाँ
काठमाण्डौ–जनकपुर ४३००/- रुपैयाँ
काठमाण्डौ–सिमरा ३१२०/- रुपैयाँ
काठमाण्डौ–भैरहवा ६२००/- रुपैयाँ
काठमाण्डौ–धनगढी १२,६५०/- रुपैयाँ
काठमाण्डौ–नेपालगञ्ज १०,०००/- रुपैयाँ
काठमाण्डौ–भद्रपुर ९१००/- रुपैयाँ
काठमाण्डौ–तुम्लिङटार ६,०००/- रुपैयाँ
काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले बिहीबार रातिदेखि आन्तरिक तर्फको हवाइ इन्धनको मूल्य घटाएसँगै अन्तरिक हवाइ सेवाको पनि भाडा दर घटेको छ । वायुसेवा सञ्चालकहरूको छाता संगठन नेपाल वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका प्रवक्ता
नुवाकोटको शान्तिबजारमा प्रहरी चौकी तोडफोड र हवाइफायर
विदुर। नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५ शान्तिबजारमा रहेको जलविद्युत् आयोेजनाको निर्माण सामग्री चोर्दै गरेका एक अभियुक्त त्रिशूली नदीमा फाल्हालेका छन् । नुवाकोट र रसुवाको सिमाना मैलुङ शान्तिबजारमा निर्माणाधीन त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत्
सिमरा विमानस्थलमा हवाइ सुरक्षा अभ्यास
बारा । सिमरा बिमानस्थलमा आकस्मिक रुपमा हुने सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अभ्यास गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाइ सुरक्षा विभागको आयोजनामा सोमबार सिमरा विमानस्थलमा यस्तो अभ्यास गरिएको हो
विमानस्थलमा आकस्मिक दुर्घटना भए के गर्ने ? सिमरामा सुरु भयो हवाइसुरक्षा गोष्ठी
बारा । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाइ सुरक्षा विभागको आयोजनामा विमानस्थल आकस्मिक योजनासम्बन्धी दुई दिने सेमिनार बाराको सिमरामा सुरु भएको छ । विमानस्थलमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरण र सतर्कताका लागि सरोकारवालाहरुलाई